Margarekha पोखरा महानगरपालिका बाट हामिले पनि सिक्ने कि ? हल्ला नगरी यस्ताे काम गरिरह्यो – Margarekha
पोखरा महानगरपालिका बाट हामिले पनि सिक्ने कि ? हल्ला नगरी यस्ताे काम गरिरह्यो
देश भरि स्थानिय निकायलाइ चुस्त भन्दा बढी सुस्त भएको आरोप आइराखेको बेलामा पोखरा महानगरपालिकाले भने आफुलाई हल्लाको भिडबाट छुट्याएर उदाहरणीय काम हरु गरेको छ। बिकाशका कामहरुलाई तिब्र गति दिदै नयाँ सोच र सम्भावनामा पनि काम गरेको छ। चोक चोकमा धुलो खाएर बाटो कुरेका सहिदहरुलाई मनोरम पार्कमा पुर्याउने सोच होस् या खुला जिमको अबधारणा होस् पोखरा अरु भन्दा फरक देखिएको छ। हालै पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४\_ ७५ को भौतिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको छ।
यस्तै महानगरपालिकाले पोखरा नगर भित्र तिस वटा खेल मैदान सम्बन्धि कार्यहरू पनि सम्पन्न गरेको छ। वडा कार्यालय र सामुदायिक भवनहरुको निर्माण १३९ वटा सकिसकेको र यसका लागि महा नगर पालिकाले सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। महानगरपालिका र स्थानीय समुदाय मिलेर २२६ वटा साना तथा मझौला खानेपानीका योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। ८५२५० मिटर पाइपलाईन समेत विस्तार गरेको छ।
हेर्नुस पोखराको चिनारी भिडियो
२६ भाद्र २०७५, मंगलवार २०:५७ प्रकाशित